niamh | Save A tareenka
Qoraa: Niamh Waters
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Interrailing talooyin ku socday miisaaniyad suurto gal ah haddii aad si taxadar leh loo qorsheeyo guura. Qiimaha tigidhada tareenka, hoyga, cuntada, iyo madadaalada ha kala duwan yihiin oo u dhexeeya dalalka Yurub, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo loogu raaxeysto safar qiimo jaban. Nasiib wanaag, diyaarinta qaar ka mid ah, safarka tareenka…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Haddii aad ku soo guursatay for sano, ama aad weli ku jira marxaladaha hore ee xiriir, lamaane kasta oo ka faa'iidaysan karaan waqti tayo leh wada qaatay. Waa gaar ahaan u fiican in ay sameeyaan dadaal ah Maalinta Jacaylka. Ku safridda tareenka waa habka ugu fiican ee lagu bilaabi karo…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Socdaalka Europe by rail waa caado dheer in aan la tegey si dhaqso ah – Tareenadu waa dhaqsiyaha badan, bey'adda u fiican, iyo habka ugu wax ku oolka badan ee kolba meel looga guuro. Inkastoo nidaamka tigidhada tareenka xanuunka qaadataa soo baxay abaabulka…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo sodcaalladoodii oo tareen ee Italy bixiyaan ma aha oo kaliya raaxo, laakiin qaar ka mid ah views cajiib ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan qaadashada tareenka ee Italy waa fursad ay ku eegaan muuqaal qurux badan sida aad u safri ka mid ah meel kale. Qaybo ka mid ah Italy,…